Sweden: safarkii dacwada ee sh. maxamed idriis | Somaliska
Waxaa weli si xowli kujiro uga socda wadanka Iswiidhan safarkii dacwada ee Sh. Maxamed Idriis uu ku maraayey magaalooyin iyo tuulooyin kala duwan ee ku yaal gobolada kala duwan ee dalka Iswiidhan. Shiikhu ilaahay ajar iyo xasanaad haka siiyee waxaa uu gaarey tuulooyin aad u yar-yar oo ay ku dhaqan yihiin dad soomaaliyeed. Meelahaas oo aan culimo soomaaaliyeed horay u gaarin.
Dadka soomaaliyeed ayaa ku firxaday dhamaan daafaha kala duwan ee dunida.Ka dib kolkii ay dalkii soomaaliya ku habsatay dhibaato aan dhamaad lahayn. Magaalo kasta oo uu shiikhu tagona waxaa uu kula kulmaayey dad soomaaliyeed oo sheeganaaya dhibaatooyin kala duwan oo qurbuhu keenay, dadkaas oo si aad iyo aad ah ugu ooman ku baraarujinta diinta islaamka. Haddaba 29-kii bisha may, 2011 oo ku aadanayd maalin axad ah ayaa shiikhu waxaa uu socdaal dacwo ku tegey magaalooyinka Västerås iyo Hallsthammar oo ka tirsan gobolka la yiraa Västmansland. Magaalada Västrås ayaa ah magaalo qadiimi ah oo ay ku nool yihiin ilaa boqol iyo konton kun oo qof. Waa magaalada shanaad ee ugu weyn Sweden. Soomaalida magaaladaas ku dhaqan ayaa waxaa ay kor u dhaafaan ilaa laba kun oo qof. Sanadihii ugu dameeyey ayaa soomaalidu si aad ah usoo degeen magaalada.
Booqashadii shiikha ee magaalada Västerås
Kolkii ay saacadu hayd saddexdii galabnimo ayaa waxaa loo dareeray hool weyn oo ay diyaariyeen muslimiinta soomaaliyeed ee magaalada Västrås, hoolkaas oo ku yaala xaafada Bäckby ee magaalada Västerås.Guud ahaan walaalaha soomaaliyeed ee halkaas degan aad ayey u dadaaleen balse waxaa xusid mudan dadaalka ay sameeyeen gabdhaha muslimiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada.
Gabdhuhu waxaa ay lafdhabar u ahaayeen soodhoweynta iyo martgelinta shiikha. Dad aad iyo aad u tira badan ayaa ka soo qayb galay muxaadarooyinka shiikha. Waxaa kaloo jirey dad kale oo ka kala yimid magaalooyinka u dhow Västerås oo iyaguna kasoo qayb galay kulankaas dacwada. Dad aan halkaas kula kulmay waxaa ay ka yimaadeen magaalooyinka Nyköping, Eskilstuna, Flen, Hallstahammar iyo kuwo kale oo dhowr ah. Shiikhu laba muxaadaro oo qiimo leh ayuu halkaas ka jeediyey.
Tan koowaad waxaa ay ka hadleysey Qiyaamaha tan labaadna u baari noqoshada waalidka.
Shiikha waxaa hadalka kusoo dhoweeyey Mid aka mid ah aqoonyahanada, macalimiinta iyo odayaasha soomaaliyeed ee Sweden. Waa Cabdulaahi Amiin oo horay u ahaa macalin aad looga yaqaan Västerås iyo guud ahaan Sweden.
Muxaadaradii 1.aad: Qiyaamaha
Waxaan halkaan hoose kusoo koobayaa muxaadaradii ka hadleysey qiyaamaha
Shiikhu waxaa uu muxaadaradiisa ku bilaabay aayado ka mid ah suuratul Qaaf. Kuwaas oo ka hadlaaya arimaha qiyaamaha iyo waxyaalaha ilaahay subxaanu watacaalaa inoo sheegay.
Waxaa muhiim ah ineynaan ku mashquulin aduunyada, xoolo iwm. Kuwii sidaas yeela waa khasaareen.Waa ineynu ku xisaabtanaa in aan maalin maalmaha ka mid ah aan aduunka ka tegeyno. Waa inaan ka fekernaa maxaa noo diyaar ah, maxaad rabigii ku abuuray la hortegeysaa. Geeridu aabe, hooyo, walaal iwm ma taqaan, qof walbaana wuu dhadhaminayaa geerida. Rasuulkeena subanaa (NNKH) waxaa uu yiri; shan ka Faa`iideyso inta aan shan kale kuu imaanin.
Dhalinyaranimada ka faa ìideysta inta aan gabow kuu iman: Kolka aad dhalinyarada tahay waxaad awoodaa wax badan, waxa aad leedahay xoog. Sidaas darteed waa inaad dikriga ilaahay daa ìmtaa, waa inaad cibaadeysataa. Kolka aad gabowdo, tabartii ayaa yaraaneysa mana aad awoodi doontid wax badan oo aad awoodey kolkii aad dhalinyarada ahayd. Haddaba waa in laga faa ìideystaa dhalinyaranimada.
Caafimaadka ka faa ìideysta inta aan xanuun kuu imaanin. Caafimaadku waxaa uu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay ku minaystay dadka, balse lama oga inta aad caafimaaad ahaaneysid. Inta aad caafimaadka tahay ayaad waxqabsan kartaa oo aad cibaadeysan kartaa. Kol hadaad xanuunsato, waxaa yaraanaya awoodaada , wax badana ma qaban kartid. Marka dadka muslimiinta ahi waa iney cibaadeystaan oo aakhiro u shaqaystaan inta ay caafimaadka qabaan.
Xoolaha halaga faa ìideysto inta aadan fakhriyin. Kolka aad xoolaha haysato waa inaad sadaqo ka bixisaa, waa inaad wax ilaahay loogu dhowaanayo aad xoolaha u isticmaashaa. Haddii xooluhu ku dhaafaan oo aad fakhrisid, ma awoodid arimaha aan kor kusoo sheegnay.
Firaaqada ka faa ìideyso inta aadan mashquul noqon. Wakhtigaaga waa inaad u istiicmaashaa wax aakhriro iyo aduunba ku anfacaaya. Waa inaad wakhtiga gelisaa dikriga iyo cibaadada ilaahay, waa inaad aakhiradaada u shaqaysataa.
Nolosha ka faa ìideyso inta aan geeridu kuu imaanin. Inta aad nooshahay ee naftu kugu jirto waa inaad cibaadeysataa oo aad u shaqaysataa waxii aad ilaahay la hortegi lahayd. Mowtku waa imanayaa mar uu yimaadoba, kolkaasna hadaan waxqabanayaa lagaa yeeli maayo. Marka walaalayaal aan nolosha ka faa ìideysano. Waa inaadan dib u dhigin wax hadda aad qaban karto maxaa yeelay lama oga inaad gaareysid berito. Nafta wanaagsan ee ilaahay caabuda, ee xaqa raacda kolka ay dhimato samada oo dhan ayaa loo furaa, waana lasoo dhoweeyaa, nafta xun ee danbiga badana ma hesho wax soo dhoweyn ah.
Marka walaalayaal aan xaqa ku toosno oo u diyaargarowno dhimashada iyo maalinta qiyaame ee uu camalkaaga keliya uu ku anfaci doono.
Muxaadaradii 2`aad: U baari noqoshada Waalidka.
Shiikh Maxamed idriis, ilaahay kheyr iyo xasnaad ha siiyee waxaa uu muxaadaradiisa labaadna ku bilaabay aayado quraan ah oo ka hadlaaya waajibaadka waalidku leeyahay iyo u baari noqoshada waalidka. Aayadaha shiikhu akhriyey qaarkood waxaa ay ku jiraan suuratul luqmaan, qaybteeda dhexe. Muxaadaradii oo aan soo koobayna waa tan:
Waajibka inaga saaran waalidka iyo u baari noqoshadiisa waxaa amray ilaahay subxaanu watacaalaa. Waxaa uu alle amray isaga oo qura la caabudo, ka dibna waxaa lagu xejiyey u baari noqoshada labada waalid. Ilaahay waxaa uu yiri; waxaan farnay in insaanku waalidkiis u exsaan falo, gaar ahaan hooyada oo culaysyo badan kaa soo martay. Hooyadu uurka ayey kugu soo qaaday, wey ku nuujisey, waa kusoo xambaartay, waa kusoo korisey, nafteedii ayey ilowdey si aad adigu u korto. Kolka baarinimada laga hadlaayo hooyadu afar meelood saddex ayey xaqaas baarinimada leedahay, aabuhuna midka soo haray ayuu leeyahay. Taas waa dhinaca baarinimada balse ixsaanka iyo wanaaga labada waalidba waa leeyihiin.
Ugu horeyn waa inaad labadaada waalid aad ugu debecsanaataa, waa inaad hadalkooda maqashaa, waa inaad weji furan oo debecsan ku qaabishaa waalidkaa. Kolka ay kuu yeeraan waa inaad hadal fiican ku jawaabtaa. Hadalka waa inaadan ku adkayn, hadalada ay dhibsadaana ma dhihi kartid. Ereyadaan soo socda ee caasinimadu ka muuqato haku dhihin waalidkaa:
“ Adiga, hooyo/aabe waxba ma maqleysaan, waxba ma fahmeysaan”
“ Odaygaan/ habartaan waa waalan tahay” waxba ma maqleysid adi. Meeqa mar aan kuu sheegay waxaas, Adiga hooyo/aabe sidee lagaa yeelaa? Sidee ku yeelaa iwm”
Qaabkaas haddii aad waalidkaa kula dhaqanto, haddii aad sida xun ee aan kor kusoo sheegnay ula hadashid. La soco, waa deyn arinkaasi oo adigana kuwa aad dhashay ayaa sidaas kuula dhaqmi doona. Ereyada caasiga ah ee aad waalidkaa ku tiri ayey iyana kugu dhehi doonaan. Haddii waalidkaa aad dhibto, ogow kuwa aad dhashay ayaa ku dhibaaya, haddii aad baari u noqotona kuwa aad dhashay ayaa baari kuu noqonaaya.
Waxa aad haysato oo xoolo ah oo dhan haddii aad waalidkaa siisid ma gudi kartid abaalkooda. Waalidka oo aad nafaqaysaa baarinimada ayey ka mid atahay.
Inaad u ducayso waalidkaa ayaa lagaa doonayaa oo aad tiraahdo: Ilaahow u naxariiso labadaydii waalid sidii ay iigu naxariisteen, ee ay iisoo barbaariyeen kolkii aan yaraa.
Markii waalidkaa waayeel noqdaan waa inaad si gaar ah u dhaqaalaysaa, waa inaad ka warqabtaa, waa inaad nafaqadooda meel saartaa. Waa inaad ogtahay waxa waalidkaa ku sugan yihiin. Tankale waa inaad la socotaan, caasi waalid jano ma galo, waalid caasinimadu waxaa ay ku xigtaa ilaahay oo caabudaadiisa cid kale lala wadaajiyo( shirk)
Waalid caasiga waxaa laga qaadaa barakada oo dhan. Xoolihiisa, gurigiisa, ilmihiisa dhamaan barakada ayaa laga qaadaa. Qofka waalidku raali ka noqdaana janada ayuu galaa. Haddaba waxaan idinkula dardaarmayaa u baari noqoshada waalidkiin ayuiu shiikhu hadalkiisa kusoo xiray.
Magaalada Hallstahammar waa magaalo yar oo aan aad uga fogeyn Västerås. Waxaa degan ilaa dad lagu qiyaaso 15 kun oo qof. Soomaalida degan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40-50 qoys. Waxaaana ay soomaalidu magaalada soo degeen sanadihii ugu dameeyey.
Salaadii makhrib ka dib ayaa sh.maxamed idriis ka bilaabay muxaadaro lawada sugaayey oo ka hadleysey walaaltimada isku xirnaanshaha. Shiikhu waxaa uu aad ugu dheeraaday faaìidada ay leedahay walaaltinimada iyo isku xirnaanta iyo weliba kheyrka oo la isugu kaalmeeyo. Waxaa uu dadka u sheegay iney masjidka soo camiraan oo ay salaadaha jamaacada kusoo tukadaan si aan sheydaanku cidla uga helin. Qofka haddii uu kheyrka ka fogaado waxaa fuula qalbadiisa mugdi, weyna madoobaataa ayuu yiri shiikhu.
Waa inaad islaanimada iyo walaaltinimada ku midowdaan, waxaad tihiin dad isku diin ah, isku af ah , isku dhaqan ah, isku dan ah. Waa waajib inaad iskaashataan oo aad is walaalsataan. Waa inaad islaanimada ku walaalowdaan, taa weeye walaaltinimada rasmiga ah. Diinta ayaa walaal lagu yahay, sidaas ogaada.
Nebi nuux (nnkh), wiilkiisii kolkii uu diidey diinta islaamka waxaa lagu yiri nebi nuux, wiilkaaga ma aha ehelkaaga. Wiilkiisina waxaa uu ka mid noqday kuwii la hafiyey ee doonta ku harqaday. Dadkiinaan qurbaha joogaa haldoon ayaad wada saaran tihiin, haday degtona dhamaantiin waa degeysaan. Sidaas darteed waa inaad iska kaashataan oo ka wada shaqaysaan sidii aad naftiina iyo ubadkiina u badbaadin lahaydeen.
Dalkeenii barwaqadu dhex jiiftey waxyaalaha idinka soo saaray waxaa ka mid ah qabiil. Dalkeenii ayuu baabi `iyey , dadkeenii ayuu baabi ìyey , waa nasiibdaro hadii idinka oo qurbo yimid aad weli waxaas ku dhexjirtaan oo aad idinkii iskala takooreysaan.
War ilaahay ka baqa, oo rabigii idin abuuray u toobad keena, oo iscafiya oo badbaadiya ubadkiina aad halka keenteen. Haddii aydinaan reer reer iwm ka haraynin oo ay dhab idinka tahay, ordaya wadankiinii aada , ayaa sheekhu si aad u kulul u yiri.
War bal ii sheega waxaa reer qansax iyo reer qurac kuu qabteen, waa adinka la idinka kari la`yahaye. War ilmihinii ayaa meel walba ku dhibaateysan, war ubadkiinii baa meel walba daadsan. Waa inaad iyaga wakhti gelisaan, iyaga ayaa wakhti kaaga baahan. Inta aad boqolaal saacadood ku dhumineysid, reer qansax , reer meygaag, iyo reer qurac, Maka tashateen weligiin mustaqbalka caruurtiina, ma isweydiiseen yaa cid u ah, yaa u hadlaaya oo gaalada ku oranaaya, waxaas iyo waxaas ayaan u baahanahay oo dad muslimiin ah baan nahay. Hal cunug haddii uu diinta ka leexdo oo dhumo ilaahay waa idin weydiinayaa. Walalayaal ilaahay ka baqa , waa la dhimanayaa , aduunkaan adoo qaawan baad timi, adoo qaawana waa lagaa wadi. Sidaas darteed aan iswalaashano oo aan diinta isu kaashano oo aan ku dadaalo nafteena iyo ubadkeena.
Walaalayaal intaas oo dal ah, oo magaalo ah waxaan usoo maray inaan keyrka idin soo gaarsiiyo oo aan xaqa idiin sheego. Ilaahow waa u sheegay ayuu yiri shiikha isaga oo indhihiisa ay murugo iyo qiiro ka muuqato.
Ilaahay ha inagu anfaco kheyrka iyo wanaaga uu sh. Maxamed idriis inoo sheegay isagana ilaahay ajar iyo xasanaad haka siiyo. Safrakii dacwaduna waa socdaa. La soco!
Waxaa diyaariyey: C/risaq maxamed Xuseen
Ilaahay subxaanu watacaalaa, ajar iyo xasanaad haka siiyo shiikheena maxamed idriis wanaaga iyo dadaalka uu u galay in dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga diintooda iyo dhaqankooda ilaashadaan. Sh.maxamed idriis iyo maraakiizta soomaaliyeed ee sweden ee la shaqaynaya, waxaan leeyahay halkaa ka wada dadaalka anagana ilaahay ha inaga dhamaanteen kuwii wax ku qaata.
Waxaan kaloo u mahadcelinayaa walaalkeen c/risaq ee sida wanaagsan u diyaariyey maqaalkan. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa somaliska.com. Halkaa ka wada howsha aad shicibka u haysaan.
Masha;Allaah Sheekha Allaha khayr siiyo Magaalada aan deganahayna sidaan oo kale ayuu boorka uga jafay , Allaha danbigiisa Dhaafo Sheekheena runtii waanooyin muhiima ayuu nasiiya , oo ay ka mid ahayd , Midnimda Soomaaliyeed , gaar ahaana dadka magaaladeena , Wadaaga Danta Guud, Tarbiyada Ilmaha , Waajibnimada u helida ilmaha iskoolo Islaamiya iwm.